Xildhibaan Gama’diid oo ku baaqay in si deg deg ah loo bixiyo mushaarka Ciidamada – Kalfadhi
Xildhibaan Gama’diid oo ku baaqay in si deg deg ah loo bixiyo mushaarka Ciidamada
Yuusuf Xuseen Axmed (Gama’diid), oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana wareysi gaar ah siiyay Kalfadhi ayaa walaac ka muujiyay xaaladda amni darro ee ka jirta magaalada Muqdisho iyo cabashada Ciidamada.
Xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed oo katirsan Xisbiga uu hogaamiyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ee Himilo Qaran ayaa sheegay in DF-ka Soomaaliya laga doonayo bixinta xuquuqda Ciidamada Soomaaliya lagana dhigo waxa ugu horreeyo ee qaata Mushaarka ay bixiso Dowladda Soomaaliya.
“Xisbiga Himilo Qaran waxa uu ka walaacsan yahay xaaladda amni ee Soomaaliya, gaar ahaan amaanka magaalada Muqdisho oo ay ka dhacayaan dilal, weeraro iyo qaraxyo” ayuu yiri Xildhibaan Yuusuf Xuseen oo katirsan Xisbiga Himilo Qaran.
“Walaaca ugu wayn ee aan qabno waa in Ciidamadii ay mushaar la’aan uga soo baxayn furumihii dagaalka, dowladana ay iska indha tirayso” ayuu yiri Xildhibaan Gama’diid oo katirsan Golaha Shacabka ee BFS.
Xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed ayaa sheegay in Xisbiga Himilo Qaran ay baarayn cabashada Ciidamada islamarkaana ay soo ogaadeyn in aysan Ciidamada qaadan wax mushaar ah sidoo kalane aysan helin garaamkii ay bixin jirtay Dowladda Soomaaliya arimahaas oo dhanna ay sababayn in Ciidamada ay ka soo baxaan furumaha dagaalka.
“In ciidamada ay ka soo baxaan aagga dagaalka waxay fursad u tahay Al-shabaab, Ciidamada waxaan ugu baaqayaa in ay ku laabtaan degaanadii ay ka soo baxayn Ciidamada difaaca Soomaaliya.
“Dhiig ayaa ku daatay, dad badan oo muhiim ahna waan ku waynay dagaalkii Al-shabaab looga saaray goobaha ay ciidamada hada ka soo baxayn” ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Xildhibaan Yuusuf Xuseen Gama’diid oo katirsan Xisbiga Himilo Qaran ee uu hogaamiyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland oo ku baaqay in loo midoobo dagaalka Al-shabaab
Golaha wakiillada Puntland oo maaliyadda su’aalo dheeraad ah ka weydiinaya arrimaha miisaaniyadda